Gịnị bụ Monitoring Cloud? Otu esi arụ ọrụ & omume kacha mma
Bipụtara: Septemba 12, 2019
Emelitere: Febụwarị 10, 2022
Otu igwe nlekota igwe ojii si arụ ọrụ
Ikike nlekota igwe ojii
Nlekota gburugburu Uzo ojii na Motadata
Na-eche na akụkụ niile ma ọ bụ ụfọdụ nke infra IT gị dị n'ígwé ojii, ị ga-eji nlezianya nyochaa igwe ojii ozugbo. Akụkọ a na-egosi ihe na otu esi eleba anya gburugburu igwe ojii.
Ikwu okwu n’oge ugbua azụmaahịa ọ bụla na-eji igwe ojii eme ihe n’ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ n’ụzọ ọzọ. Dịka nyocha ọ bụla, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 93% nke òtù dị iche iche na-ekwupụta na, ha na-atụkọta ọrụ igwe ojii, ọtụtụ ndị IT na-atụ anya itinyekwu ego na teknụzụ a na-apụta.
Akụkọ ahụ gara n'ihu na-agbakwụnye na, òtù dị iche iche ejirila 26% karịa ọrụ igwe ojii / ngwa ndị afọ gara aga, nke na-emeri igwe ojii na-emefu na mmefu IT niile. Gwé ojii na-enye mmụba azụmaahịa na-enweghị atụ na scalability & agility. Ọ bụ ezie na uto na ojiji igwe ojii, na-abịa ngwa ngwa mkpa iji nyochaa arụmọrụ netwọk.
Nke ahụ bụ ebe igwe ojii nlekota na-abata. Can't nweghị ike ileghara oge mmeghachi omume anya, n'okpuru ma ọ bụ karịa iji igwe ojii tinye n'ọrụ, ma ọ bụ ihe ọmụma ruptures. Nlekota ígwé ojii infra na-enyere gị aka ilegide anya na oge mmeghachi omume, nnweta, ọkwa ojiji nke ngwa ahịa, ogbugbu, dịka nsogbu nsogbu.
Igwe ojii nlekota oru nyocha igwe ojii gburugburu gụnyere, usoro usoro gụnyere nyocha, nlekota IT na ijikwa ngwa igwe ojii. Usoro a gụnyere iji ntuziaka yana ịlele IT akpaghị aka (yana ngwaọrụ ITOM / NMS) yana ụfọdụ usoro nchịkwa usoro ojii na usoro iji jide n'aka na ọ na-arụ ọrụ nke ọma & nke ọma.
Ọ bụ ụzọ a ga-esi elebanye anya na etu esi arụ ọrụ ọrụ yana usoro maka ọrụ igwe ojii, ngwa ma ọ bụ akụ. A na-emekarị ya site na ngwanrọ ITOM ma ọ bụ usoro nyocha nke a na-ahụ maka igwe ojii nke na-enye ohere ịnweta ikike na ikike karịrị igwe ojii.
Ndị nchịkwa nwere ike nyochaa ọkwa arụmọrụ yana ụda nke sava igwe ojii na ngwa.
Nchegbu na-apụta dabere na ụdị igwe ojii ị nwere, na otu ị si eji ya. Ọ bụrụ na ị na-eji infra ojii mepere emepe, ị ga-enwe ike ịchịkwa njikwa nke infra IT. Igwe ojii nke onwe, nke ọtụtụ nnukwu mkpakọrịta na-eji, na-enye n'ime ụlọ ọrụ IT njikwa na njikwa na mgbanwe, yana uru itinye n'ọrụ.
N'agbanyeghị ụdị igwe ojii nke nzukọ gị na-eji, ileba anya na ya bụ nzọụkwụ bụ isi maka igbu egbu yana meziwanye nchekwa IT.
Gwé ojii ahụ nwere ọtụtụ akụkụ na ya, ọ dịkwa mkpa iji nyochaa ya iji jide n'aka na ihe niile na-arụ ọrụ oge niile maka arụmọrụ na-enweghị ntụpọ. Ọ na-etinyekarị ihe ndị a:
Nyocha saịtị: Ndepụta usoro, okporo ụzọ, nnweta na ojiji nke saịtị ndị na-eme ka igwe ojii
Nyocha igwe mebere: Nyochaa ngbanwe nke izizi ya na VM ya
Nlekota data: Ụdị nleba anya, ajụjụ, nnweta, yana iji akụ nchekwa data igwe ojii dịka Azure
VMs nlekota oru: Nyochaa usoro akụ nke usoro, ngwa, mkpakọrịta, na ogbugbu VM
Nlekota ebe nchekwa: Nyochaa ngwongwo akụ na usoro ha nyere VM, nchịkwa, ọdụ data, na ngwa.
Nlekota akụrụngwa igwe ojii na ngwakọ na-eme ka ọ dị mfe ịmata ọdịiche dị iche iche nke ụlọ ọrụ netwọkụ yana isi ihe egwu IT nwere nsogbu. Offọdụ n'ime ike ikpuchi igwe ojii dị ka ndị a:
Ike inyocha oke nke ozi igwe ojii na-agafere ọtụtụ mpaghara ekwenye
Nweta visibiliti na isi igodo nke ngwa igwe ojii iji gbochie nsogbu nwere ike ịdị
Na-echekwa oge elekere iji na-ekwe nkwa nke ọhụrụ na agbanweela akwụkwọ n’iji nwayọ
Valutụle ma kpughee ikike iji lekọta ihe nchekwa nchekwa IT
Mmekọrịta ya na ndị na-enye ọrụ igwe ojii dị ka Amazon AWS wdg.
Omume kachasị maka Nlekota igwe ojii
Nkwa nke oma na igbu oge IT n’enweta ihe ichoro igwe ojii di nkpa. Ndị a bụ ụfọdụ ụzọ kachasị arụ ọrụ iji jikwaa gburugburu igwe ojii ma na-echekwa usoro dị anya site na nsogbu ikwugharị:
Nche IT: Nchebe IT dị ezigbo mkpa na igwe ojii yabụ ilekọta ozi na njedebe niile na-ebelata ihe egwu. Nhazi nke na-edozi, gbarie, ma na-agagharị na ozi tupu ya ahapụ usoro ahụ na-enyere aka hụ na enweghị ozi furu efu. Ọ bụ ihe ọzọ dị oke mkpa iji nyocha, nyocha, na otu ozi tupu ebudatara ya na sistemụ iji zere malware na nkwụsịtụ ozi.
API: Igwe ojii nwere ike inwe ọtụtụ mbipụta ogbugbu sitere na API ndị anaghị ezu ezu. Can nwere ike ịnwe ebe dị anya site na mmebi API ojii na-adịghị mma site na iji API nke na-arụ ọrụ site na IT Ops. Nsonaazụ nke iwetulata oku API akpọrọ nke na-ebute okporo ụzọ dị ala. API nke nwere atụmatụ na-agbanwe agbanwe na obere ikike n'ụdị data ya na-eweta mmezu usoro ka mma.
Ngwa Ọrụ: Oge mmeghachi omume nke ngwa na nkwado akụ dị oke mkpa n'ịghọta ihe na-egbochi ezigbo arụmọrụ nke arụmọrụ na igwe ojii. Gbaso usoro ọrụ nke ngwa ahụ, na-agba gị ume ịmata ebe & mgbe nkwụsị na-eme.
Kesa Cloud Servers & Nchekwa: Proleghara ọrụ igwe ojii - na - ebuli akụ nke IT, ohere ha nwere ma gbochie imezu usoro. Sọftị ITOM nwere ike ime ka ị chọpụta ihe ndị ahụ, n'oge ahụ site na iji atụmatụ na ụzọ kwesịrị ekwesị.
Ileba anya n'igwe ojii choro ihe eji egwu ogbugbu ya, ihe ndi ozo ji abanye ha, na nnweta ha ma na-ekwe nkwa mgbanwe nke ozi di n’etiti ha. Nke a na-enye òtù dị iche iche ike ịchọpụta nkwekọ site na ịgbanwee ihe egwu ma na-eji uru nke igwe ojii ahụ.
Inyocha igwe ojii, nke ọhaneze, na ngwakọ ngwakọ dị mfe karịa na ị na-arụ ọrụ na igwe ojii nzuzo maka ihe anyị zoro aka na mbụ (visibiliti & njikwa), ka ị na-abịaru ígwé ojii infra.
Ngwunye igwe ojii na-eweta ngwakọ nke ihe ịma aka nlekota ọhụụ, ebe data bụ akụkụ nke ma igwe ojii ma ọha ojii. Ndabere n'ihi nchedo IT na nkwenye nwere ike ime ohere maka nsogbu ụfọdụ maka ndị ọrụ njedebe na-anwa ịnweta data ahụ. Ndị nchịkwa IT nwere ike idozi nsogbu igwe ojii metụtara arụmọrụ arụmọrụ site na ịlele data nke ịchekwa na igwe ojii, yana data aga-emelite mgbe niile. Mmekọrịta maka nchekwa data nwere ike ịbụ ọrụ siri ike, mana ịkesa data a n'ime obere obere, ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma nwere ike inye aka belata ọnụ ọgụgụ nke nsogbu nwere ike ịme n'ọdịnihu.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na igwe ojii nkeonwe na-enye gị ikike ịchịkwa, n'agbanyeghị na ị ga-egwupụta ibu ndị pụtara ìhè iji kwenye na igbu egbu dị mma. Enweghi ike idozi ihe ndi ozo di na aka, igaghi achota udiri nke okike nke igwe ojii eji eme ihe na ọkwa di iche.
Ihe nlekota oru IT (ITOM) dika Motadata bara uru maka nlekota igwe ojii, ebe ha nwere ike isochi ogbugbu, kọọ nsonaazụ, ma dọọ gị aka na ntị maka nsogbu nchịkwa. Akụrụngwa a maka ITOM nwere ike inyere ndị ọrụ aka nyochaa, nyochaa, kwalite ma dozie nsogbu ndị ahụ achọpụtala na mpaghara igwe ojii ọ bụla site na ntọala ruo na ahụmịhe njirimara iji nweta ọhụụ kachasị mma na akụ ojii.
Motadata na-enyocha Amazon AWS, Microsoft Azure, Google App Engine, na gburugburu igwe ojii. Igwe igwe ojii nke Motadata bụ nke so na sọftụwia ITOM makwaara dị ka Infrastructure Intelligence Platform (IIP) na-enyocha ọkwa dịka nnweta, oge nzaghachi, na oge ojiji nke akụ igwe ojii, wdg iji hụ na ọ na-arụ ọrụ kachasị mma, 24 x 7 oge niile.